प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि आन्दोलनको शंख फुक्नुपऱ्यो : बाबुराम भट्टराई
२०७७ माघ २२ बिहीबार २०:२०:००
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा बिहीबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरेको जिकिर गरे ।
उनले मुलुकमा प्रतिगमन फस्टाउँदै गएकाले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि आन्दोलनको शंख फुक्नुपरेको बताए । ‘जनताबाट बहुमत पाएका ओलीले संसद् विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै ‘कु’ गरेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘तानाशाही ओलीले मुलुकका सबै ठाउँमा आफ्नो कब्जा गर्न थालेका छन् । कामचलाउ भएका ओली सरकारले संवैधानिक आयोगलगायत विभिन्न ठाउँहरूमा प्रक्रिया नै नपुगी आफ्नो मनखुसी नियुक्तिहरू दिन थालेका छन् । यसले कालान्तरमा राम्रो गर्दैन ।’
ओलीका कारण मुलुकमा संविधान र लोकतन्त्रका साथै संघीयता नै खतरामा परेको डा. भट्टराईको भनाइ छ । उनले कांग्रेससँग सहकार्य हुन नसक्दा आ–आफ्नै तरिकाले सडक संघर्ष गर्नुपरेको पनि बताए । ‘हामीले नेपाली कांग्रेसलाई ओली सरकारविरुद्ध संयुक्त रूपमा सडक आन्दोलन गरौँ भन्यौँ । कांग्रेसले नेकपा औपचारिक रूपमा नफुटेसम्म संयुक्त आन्दोलन नगर्ने भनेका कारणले संयुक्त आन्दोलन हुन सकेन,’ भट्टराईले भने ।
बाबुराम भट्टराईको ट्विट, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको दाबी टार्ने ठाउँ छैन’
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख, केही दिन चिकित्सकको निगरानीमा अस्पतालमै बस्ने
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको न्युरो इन्डोक्राइन ट्युमरको शल्यक्रिया हुने, आज अस्पताल भर्ना हुँदै
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव छिट्टै अघि बढ्छ : डा. भट्टराई
बाबुरामले भने– ओली अरूको सिकारमा विषाक्त घाँस हाल्दै छन्